Android OS application များ Archives - Page4of 274 - Myanmar Mobile App Mobile News
Android ဖုန်း Firmware များ
G Five Firmware
Myanmar Mobile App for Android
ကမ္ဘာ့ လူသုံးအများဆုံး App အဖြစ် Facebook က ရပ်တည်
iPhone 7မှာ Home Button တွင်လည်း 3D Touch ပါဝင်မည်
အမေရိကတိုက်မှာ စက်ရုပ်ပေါင်း ၂သိန်း၆သောင်းခန့် အလုပ်လုပ်နေကြ
Huawei ရဲ့အသစ်ထွက်စမတ်ဖုန်း Huawei GR5
iPhone Second-hand တွေဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်
Storage ပမာဏ 2TB နဲ့ SSD အမျိုးအစား Samsung ရဲ့ External Storage T3
Huawei GR5 Unboxing [Video]
တယ်လီနောရဲ့ စူပါဇီးကွက် Plan နဲ့ Online ကနေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကြည့်မယ်
ဟောလိဝုဒ် မော်ဒယ် Kim Kardashian ရဲ့ Emoji iOS application
COC Player များအတွက် Auto attack / Auto troop train / Auto farm / Auto troop request / Auto troop donate / Auto wall upgrade / Auto barrack boost / Auto King queen boost / Auto collector collect ပေးတဲ့ apk
PYAUNG – Convert Between ZawGyi and Unicode For iOS
Viber & Facebook Lastest version
Android App: COC AIO Tool apk
Android App: Messenger 1.6.043 apk
Android App: Youtube 11.01.56 apk
Instagram တွင် Account တစ်ခုထက်ပိုပြီးထည့်သုံးနိုင်ပြီ [How To]
တရုတ်လို TWRP တွေဖြစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေကြသလား
EMMC RAW Tool for Qualcomm Devices
Viber & Facebook Lastest version Samsung Galaxy A8 ( A800F ) THL-A800FXXU1AOL4 v5.1.1 Firmware VROOT Lastest v1.8.7.20299 Samsung Galaxy Tab S Lollipop Firmware iPhone 5SE ကို ပန်းရောင်နှင့် အခြားရောင်စုံလည်းရမည် ကမ္ဘာ့ လူသုံးအများဆုံး App အဖြစ် Facebook က ရပ်တည် Home Archive by Category "Android OS application များ" (Page 4)	Android OS application များ	Ko Htoo, November 4, 2015	CoC Editor Application	Android OS application များ CoC game ကို ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက် မြန်မာလိုပြင်ဆင်ဆော့ကစားနိုင်မဲ့ CoC Application လေးကို Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျတော်လဲ တွေ့လို့ပြန်လည် Sharing ပြုလုပ်ပေးလိုက်တာပါ။ စတင်ပြုလုပ်တဲ့သူကို Credit ပေးပါတယ်။ ဆော့ကစားလိုသူများ Application လေးကိုအောက်ကလင့်ကနေ Download ရယူလိုက်ပါ။ Original‬ csv Uploader အား Credit ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ Created … Ko Htoo, November 3, 2015	COCMMFontUIChanger apk	Android OS application များ Android ဖုန်းအသုံးပြုသူ CoC game ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် COCMMFontUIChanger apk လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Application လေးကိုအသုံးပြုပြီး CoC game မှာ Myanmar Font ကို Build-in အနေနဲ့ဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Application လေးကို ဖန်တီးထားတာကတော့ Ko Saing Maung ဖြစ်ပါတယ်။ Application လေးကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် ဖုန်းမှာ ROOT … Ko Htoo, November 3, 2015	B1 Archiver zip rar unzip apk	Android OS application များ B1 Archiver zip rar unzip apk ကိုတောင်းဆိုထားတဲ့အကိုအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျတော် Google Play Link နဲ့ Zippyshare.com Link ဆိုပြီး နှစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေရာ နေရာကနေ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ တောင်းဆိုထားတဲ့အကိုနဲ့အတူ လိုအပ်မှု့ရှိသူများ ရယူလိုက်ပါအုံး ခင်ဗျာ။ Google Play … Ko Htoo, November 1, 2015	ပိဋကသုံးပုံလေ့လာချင်သူတွေအတွက် CSPitaka For Android	Android OS application များ ပိဋကသုံးပုံ လေ့လာချင်သူတွေအတွက် CSPitaka Software လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Software လေးကထွက်ထားတာကြာပြီဆိုပေမဲ့ လိုအပ်တဲ့သူတွေရှိနေကြတုန်းမို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဘုန်းဘုန်းတွေလဲ လိုအပ်မှု့ရှိလို့တောင်းဆိုဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့်လိုအပ်သူများအားလုံး ရယူလိုက်ပါ။ ဒီ Software လေးထဲကနေ ပိဋကသုံးပုံပါဠိတော် / အဘိဓာန် ကို ဘာသာစကားလေးမျိုးနဲ့ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ applicaton နဲ့ … Ko Htoo, October 30, 2015	Lucky Patcher Lastest version	Android OS application များ Lucky Lastest version လေးကို လိုအပ်လို့တောင်းဆိုထားတဲ့ အကို နဲ့အတူ လိုအပ်သူအားလုံးအလွယ်တကူ ရယူနိုင်ရန် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင်တော့ Download ရယူလိုက်ပါအုံး ခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ။ Warmly Welcome Ko Htoo ( MMAS )
Aung Ko Htet, October 26, 2015	တယ်လီနောမှ အလကားပေးလိုက်တဲ့ Cloud Storage (သို့မဟုတ်) Capture Application	Android OS application များ iOS application များ Latest Posts mobile knowledge အခုနောက်ပိုင်းမှာ စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ တွေအနေနဲ့ Storage ပမာဏကို Built In ထည့်သွင်းပေးပြီး ထုတ်လုပ်ကြသလို အချို့ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ တွေက နောက်ထပ် Memory ကဒ် ထပ်ထည့်အသုံးပြုနုိုင်အောင် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားကြပါတယ်။ Memory ထပ်တိုးလို့ရတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေအနေနဲ့ ကိစ္စအထွေအထူးမရှိပဲ … Aung Ko Htet, October 26, 2015	Android မှာ အသုံးပြုခွင့်ပေးလုိုက်တဲ့ Apple Music Android OS application များ Latest Posts mobile knowledge Apple Music ဆိုရင် ရိုးရှင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ စုံလင်တဲ့ Feature တွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် iPhone အသုံးပြုသူတို့ သိကြတဲ့အတုိုင်းပဲ ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ Apple Music ကို Android ဖုန်းတွေမှာပါ အသုံးပြုခွင့်ရနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Beta (စမ်းသပ်) … Ko Htoo, October 26, 2015	Hardware ပိုင်းကိုလေ့လာနိုင်မဲ့ iFixt Application	Android OS application များ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ application များ Hardware ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး LCD လဲခြင်း / Touch လဲခြင်း Camera လဲခြင်း အစရှိတာတွေကို လေ့လာနိုင်မဲ့ Application လေးတစ်ခုကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Application လေးကတော့ iFixt လို့ခေါ်တဲ့ application လေးပါ။ ဒီ Application လေးထဲကနေပြီး Brand တော်တော်များများနဲ့ … Myanmar Mobile App, October 20, 2015	Telenor အသုံးပြုသူတွေအတွက် ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယိုသိမ်းဖို့ Storage 20 GB အခမဲ့ရရှိမည့်အစီအစဉ်	Android OS application များ iOS application များ Telenor အသုံးပြုသူတွေအတွက် Telenor မှဖြန့်ချိလိုက်တဲ့ app လေးတစ်ခုပါ။ Capture App လို့ခေါ်တဲ့ ဒီ app လေးဟာ Telenor SIM Card အသုံးပြုသူတွေအတွက် ဖုန်းထဲက ဓာတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယိုတွေကိုသိမ်းဖို့ Online Storage အနေနဲ့ 20 … Aung Kham, October 7, 2015	အိပ်ယာဝင်ခါနီး ဖုန်းသုံးရင် ဖွင့်ထားရမယ့် App	Android OS application များ အိပ်ယာပေါ်မှာ စမတ်ဖုန်း သုံးတဲ့အခါ အလင်းရောင်ထွက်နေပါတယ်။ ယင်း အလင်းရောင်ဟာ မှိန်မှိန်လေး ဖြစ်နေသည့်တိုင် သင့်ဘေးမှာ အိပ်နေတဲ့ အခြားလူတွေကိုပါ မအိပ်ချင်အောင် ထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍သာ အိပ်ပျော်ရခက်သူတွေအတွက်ဆိုရင်ပေါ့။ ကိုယ်တိုင်သုံးနေသူ ဆိုရင် တော်တော်နဲ့ အိပ်လို့တောင် ပျော်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ယင်း … Page4of 274Prev1...23456...274Next
Adv	Like us on Facebook	Myanmar Mobile App
Share on Facebook	၂၀၁၆ မတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်ရေးသင်တန်း (Mobile Software/Hardware System Repairing Course) တန်းခွဲသစ်များဖွင့်လှစ်ပါမည်။ Recent Posts	Viber & Facebook Lastest version
Samsung Galaxy A8 ( A800F ) THL-A800FXXU1AOL4 v5.1.1 Firmware
VROOT Lastest v1.8.7.20299
Samsung Galaxy Tab S Lollipop Firmware
Myanmar Mobile App Store | မိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်ရေးသင်တန်းကျောင်း (Mandalay)
၇၃ လမ်း ၊ ဗန်းမော်တိုက်လမ်းကြား ၊ ဗန်းမော်ကျောင်းတိုက်အနီး ၊ မန္တလေးမြို့
ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉ ၇၉ ၇၂၄၈၄၈၈ ၊ ၀၉ ၉၁၀ ၃၃၁၃၄
Myanmar Mobile App Store | မိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်ရေးသင်တန်းကျောင်း (Yangon)
အမှတ် ၁၁၉ ၊ ပထမထပ် ၊ ၂၀ လမ်း (အလယ်ဘလောက်) ၊ လသာမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့
ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉ ၇၃၀၂၅၀၆၇ ၊ ၀၉ ၂၅၉၂၆၉၂၈၉ ၊ ၀၉ ၇၉၉၅၆၆၄၃၃
© Copyright 2016. Powered by Myanmar Mobile App.	PASSWORD RESET